Qiimaynta Ciyaartoyda Arsenal & Man United Ee Kulamadii Ay Guulaha Ka Gaadheen Huddersfield & Man United Iyo Xidighii Kulamadan Isku Muujiyay. | Laacib.net
Qiimaynta Ciyaartoyda Arsenal & Man United Ee Kulamadii Ay Guulaha Ka Gaadheen Huddersfield & Man United Iyo Xidighii Kulamadan Isku Muujiyay.
08-12-2018 Mohamoud Batalaale 1
Kooxda Manchester United ayaa ugu danbayn Old Trafford raaxo ku dareentay waxayna 4-1 ku xasuuqday kooxda Fulham iyada oo wiilasha Jose Mourinho ay iska fududeeyeen culayskii ka saarnaa natiijooyinkii xumaa ee kulamadii ugu danbeeyay.
Dhinaca Arsenal rekoodhka guuldaro la’aanta Arsenal ayaa halkiisa ka sii socday kadibmarkii ay dirqi saddexda dhibcood kaga heshay kooxda Huddersfield. Arsenal ayaa u baahatay gool soo daahay si ay u hesho guul xili ciyaareedka kooxdeeda muhiim u ah.
Manchester United waxay si ku meel gaadh ah ugu sii fadhiisatay kaalinta lixaad ee kala saraynta Premier league halka sidoo kale Arsenal ay kaalinta saddexaad ku sii fadhiisatay ka hor kulamada Chelsea iyo Tottenham ee saacadaha soo socda la ciyaari doono.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo wada gudbinaynaa qiimaynta ciyaartoyda kulamadii ay Manchester United iyo Arsenal guulaha ka gaadheen kooxaha Fulham iyo Huddersfield sida ay u kala horeeyaan iyada oo aanu eegi doono ciyaartoydii kulankan isku muujiyay iyo waliba xidigihii garoomada ugu fiicnaa.
Qiimaynta Ciyaartoyda Arsenal-Huddersfield
Arsenal waxay sii joogtaysay rekoodhka guuldaro la’aanta ee tartamada oo dhan waxayna gaadhsiisay 21 kulan oo xidhiidh ah iyada oo Lucas Torreira uu markale gool cajiib ah ku xaday quluubta jamaahiirta kooxdiisa Arsenal wuxuuna ahaa xidiga guusha u horseeday Gunners ee xaaladii adkayd ka saaray.
Arsenal ayaan wali xili ciyaareedkan hal kulan hogaanka ciyaarta hayn waqtiga nasashada laakiin haddana waxay noqotay kooxda kaliya ee dhibcaha ugu badan shaqaysatay tobanka daqiiqo ee kulamada ugu danbeeya iyada oo 8 dhibcood heshay halka Man United oo ku soo xigtaa ay 4 dhibcood heshay tobanka daqiiqo ee ugu danbeeya ciyaaraha.
Xidigii Garoonka: Lucas Torreira ayaa markale noqday xidigii garoonka ugu fiicnaa isaga oo iska yeeshay in kulan kasta oo ay kooxdiisu soo ciyaartay waqtiyadii ugu danbeeyay uu noqonayay xidiga garoonka ugu fiican. Lucas Torreira oo dhaliyay gool laba lugoodley ah ayaa muujiyay sababta uu u yahay saxiixa xili ciyaareedkan ugu fiicnaa.
Lucas Torreira oo goolkiisii ugu horeeyay soo dhaliyay kulankii Tottenham ayaa hadda u muuqda mid Gunners siiyay awood labaad oo gool dhalineed isaga oo shaqadiisa hal abuurnimo iyo difaacasho markii horeba amaan wayn ku helayay.
Halkan ka daawo muuqaalka goolkii cajiibka ahaa ee uu Torreira guusha ugu hogaamiyay kooxdiisa Gunners waana gool u tartami kara abaal marinta bisha iyo waliba goolka xili ciyaareedkan ee Premier league.
Lucas Torreira ayaa xidigii garoonka ugu fiicnaa noqday kulamadii Liverpool,Bournemouth, Tottenham, Man United iyo waliba kulankan ugu danbeeyay ee Huddersfield.
What a goal from Lucas Torreira #ARSHUD #Arsenal #EPL #COYG pic.twitter.com/E4AQJduG1D
— Bada (@BADAOLUWAFEMI) December 8, 2018
Halkan kaga Bogo Qiimaynta Ciyaartoyda Arsenal-Huddersfield:
Badalkii: Iwobi (6), Mkhitaryan (6), Monreal (N/A)
Badalkii: Bacuna (6), Hadergjonaj (6), Durm (6)
Halkan 2 riix si aad u akhrisato qiimaynta Man United-Fulham.
09-12-2018 at 2:43 am
Beentaa iskadaa xidiga garoonka waxaa noqdey xchaka